Mkpa mmanu na ime ime-aka ndi di nkpa di isi
Ihe na February 24, 2020 February 24, 2020 by Aromaeasy
Site na ihicha ọbara ọgbụgba na ọgbụgba ruo na nsogbu ịrahụ ụra na ịdị uchu, mgbaàmà ndị na-enye nsogbu ndị ụmụ nwanyị dị ime na-enwe abụghị ihe egwuregwu. Maka ndị nne nwere mmụọ, enwere ntụzipụta okike nke nwere ike inye ahụ efe pụọ n'ọrịa ndị a na-ahụkarị mgbe ha na-etolite nwa. Otu ọgwụgwọ kachasị ahọrọ bụ ọgwụ aromatherapy.
Ọ bụ ezie na aromatherapy nwere ike, n'ọtụtụ ọnọdụ, bara uru. Ngw’oru ahia di iche di iche na mmanu mmanu ndi puru ime ihe ojoo. Tupu ikpebie ịzụta, gụọ site na blọọgụ a.
Gịnị bụ mmanụ dị mkpa?
Ruo ọtụtụ narị afọ, ndị mmadụ ejirila mmanụ dị oke mkpa dị ka ihe okike, nkwado nkwado maka nsogbu. Mmanụ ndị a nwekwara ike iwepụ ahụ mgbu ime na ahụ erughị ala.
Ugbu a, anyị maara na mmanụ dị mkpa - nke esitere na ahịhịa, okooko osisi na osisi - na - abụ n'ezie ndị mejupụtara kemịkalụ kemịkalụ sitere na mmiri ma ọ bụ mmịpụta mmịpụta.
Kedu ka mmanụ ndị dị mkpa maka ịtụrụ ime si arụ ọrụ?
Achọpụtaghị mmanụ dị mkpa maka ịtụrụ ime ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla ọzọ ịgestụ mmiri.
Kama nke ahụ, a na-amị ha ma ọ bụ dilita ha n'ime mmanụ ụgbọelu ejirizie ya mee elu, dị ka iji ha na ebe ntụpọ ma ọ bụ sook.
Mgbe ejiri ya dị ka ihe eji eme ihe, a na-enweta mmanụ ịhịa aka n'ahụ ma ọ bụ ngwaahịa ndị ọzọ na-elekọta anụ ahụ site na akpụkpọ ahụ. Mgbe a na-eji ya eme ihe na inhalation, ụmụ irighiri ihe ndị ahụ na-aga site na imi ma ọ bụ n’ọnụ n’akpa ume, ụbụrụ na akụkụ ndị ọzọ nke ahụ.
Mgbe ị na-abanye n'ime oghere nke imi, ụmụ irighiri mmiri na-ebunye ozi kemịkalụ na mpaghara ụbụrụ na-emetụta mmetụta anyị. Ọ bụ ya mere ịhapụ ị somethingụ ihe dị ụtọ ji mee ka agụụ na-agụ anyị ma ọ bụ ị smụ ihe mara mma nwere ike ime ka anyị nwekwuo ume. Mgbe anyị hụrụ ísì, ọ na-akpali ụdị nzaghachi niile dị n'ahụ anyị na-emetụta ọdịmma anyị. Mgbe anyị na-arịa ọrịa ma ọ bụ nwee ahụ erughị ala, a na-akpalite nchekasị anyị, ịromụ ọgwụ a canụrụma nwere ike ịbụ ihe dị ike iji nyere aka belata nchegbu.
N'iburu n'uche na ọtụtụ ọgwụ adịghị agafe mgbe ị dị ime, iji mmanụ a kapịrị ọnụ akọwapụtara n'oge afọ ime nwere ike ịbụ ụzọ dị mma isi gwọọ ọrịa ma bụrụkwa mgbaàmà na-adịghị mma. Nke a bụ isi ihe mere ha ji abịa bụrụ ndi a ma ama n’etiti ụmụ nwanyị dị ime. Mmanụ ndị dị mkpa bụ ọgwụgwọ anụ ahụ nwere ntakịrị mmetụta ọ bụla. Ọtụtụ mmadụ na-amalite iji ụzọ ndị ọzọ agwọ ọrịa, n'ihi profaịlụ nnukwu mmetụta nke ọtụtụ ọgwụ.
Mmanụ ndị dị mkpa adịghị mma maka ịtụrụ ime?
I nwere ike ịnọ na-eche, sị, "Ọ dị mma ị oilsụ mmanụ dị mkpa n'oge afọ ime?" Ebe ọ bụ na ịnwale anụ ndị dị ime na nwa ebu n’afọ bụ okwu metụtara omume, enwere ọmụmụ ole na ole na-egosi nchekwa nke mmanụ dị mkpa n’oge afọ ime. Luckily, anyị nwere ike ịchọpụta mmanụ ndị dị mkpa ị ga-eji mee mgbe ị dị ime dịka akụkọ ihe mere eme si dị nchebe.
Ọ dị mkpa iburu n’uche na mgbe ị dị ime, ọ bụghị ihe ọhụrụ na mama ịma ihe mmanụ dị mkpa mkpa. N'iburu n'uche ọgụgụ isi ndị a na mgbanwe niile na - eme n'ime ahụ gị mgbe ị dị ime, ọ dị mkpa ịgwa dọkịta gị tupu gị ejiri mmanụ ndị dị mkpa mee n'oge ime.
Na-eme ka ihe ka njọ, dabere n'ihe ngwaahịa ndị ahụ na-ekwu na ha na-eme, ọ nwere ike ọ gaghịdị adị n'okpuru nlekọta nke FDA. Yabụ na arụmọrụ, yana ihe mejupụtara nwere ike ịdị iche iche. Ọzọkwa, mmanụ dị mkpa nwere ike ịgwọ ọgwụ. N’elu nke ahụ, mmanụ dị oke mkpa site n’ụdị ha dị n’ezie, ịbụ ihe dị ndụ, ga-agafe ihe mgbochi placental ma nweekwa ike ibute nwa ebu n’afọ.
Nke ahụ kwuru, ọ bụghị ihe amamihe dị na ya iji mmanụ dị mkpa n'okpuru ntuziaka nke saịtị blọọgụ ma ọ bụ “ndị ọkachamara” ọzọ. Kwesịrị ịjụ dọkịta gị ma mmanụ dị mkpa maka ịtụrụ ime dị mma maka gị. Ọzọkwa, mmanụ dị mkpa maka ịtụrụ ime ka amụrụ nke ọma n'okpuru ntuzi aka ọkachamara, dị ka dibịa ma ọ bụ onye na-eweta ahụike gị.
Etu esi eji mmanụ dị mkpa mgbe ị dị ime
N'ozuzu, ị nwere ike itinye ha n'ọrụ n'ụzọ abụọ:
Akpụkpọ ahụ gị. Tupu ịmalite ịhịa aka n'ahụ, jiri mmanụ ma ọ bụ ụgbọelu wụsara mmanụ dị mkpa. Ma obu inwere ike itubanye ha n’ime mmiri saa aru.
Site na sistemụ iku ume gị, mgbe ị na-eku ume ha. Can nwere ike itinye mmanụ dị mkpa na a mgbasa, wee chụsaa ha ikuku.
Mkpa mmanụ dị mkpa n’oge nke mbụ
Ọ bụ ezie na ihe iyi egwu a dị ntakịrị ma ọ nweghị ọmụmụ ọ bụla iji gosipụta ihe àmà nke mmetụta ndị ọzọ n'ihi nsonso mmanụ dị mkpa mgbe ị dị ime. Ikwesighi iji mmanu di nkpa n’oge di ime ma obu na ha puru ime ka amata uterine ma obu metuta nwa gi n’oge uto. Anyị ka chọkwuo nyocha n’isi okwu a. Ọ ka mma ịnwe nchebe karịa nwute, ka emechara. Ọzọkwa, ụmụ nwanyị dị ime kwesịrị igbochi ngwaahịa aromatherapy na ọkara nke mbụ. Ọ bụ n'ihi na mmanụ ndị dị mkpa bụ ihe ndị bụ isi eji eme ọgwụ aromatherapy.
Ọtụtụ ndị dọkịta ekwenyeghị iji mmanụ dị mkpa na ọkara nke ọnwa mbụ iji nọrọ n'akụkụ nchebe mgbe oge a siri ike.
Mmanụ dị mkpa na nke abụọ na nke atọ.
N’ime oge nke abụọ na nke atọ, ụfọdụ mmanụ dị mkpa adịghị mma iji mee ya, ebe ọ bụ na esikwuru nwa gị ike. Ndị a gụnyere lavender, chamomile, na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ebe a bụ ụfọdụ aro: Kechie mmanụ ndị dị mkpa site na akara amaara aha nke dị narị pasent ọcha ma bụrụkwa nke enweghị oke. Jiri naanị mmanu dị mkpa na mpụga n'ihi eziokwu ahụ na ịkari ha nwere ike ịkpalite ime ọpụpụ, ibute ọrụ dị njọ, ma ọ bụ mejọọ nwa gị. N’ikpeazụ, ịkwesịrị iji mmanụ ụgbọelu gwaa mmanụ dị mkpa.
Ntuziaka maka iji mmanụ dị mkpa n'oge afọ ime
1. Mee ka anya ghere oghe maka ịdị mma.
Ọ bụghị mmanụ niile ka emebere ka ọ bụrụ nha, ụfọdụ nwekwara ụfọdụ ihe mejupụtara ya. Gbaa mbọ hụ na mmanu mmanu gi di ezigbo nari ise. Ọzọkwa, mee ụfọdụ nyocha iji chọta akara pụrụ ịtụkwasị obi nke nwere usoro asambodo siri ike.
2. Zere iji mmanụ na-enweghị mmerụ.
Anyị ga-adụ gị ọdụ ka ime roba nke gị jupụta n’ime mmanụ akpịrị iberibe ite ya na mmanụ dị mkpa. N'iburu n'uche na mmanụ ndị dị mkpa mejupụtara ma dịkwa ike, dose ahụ kwesịrị ịbụ 10 tụlee nke mmanụ dị mkpa maka mmanụ 1 nke mmanụ ụgbọelu XNUMX ọ bụla.
3. Anọla na mmanụ ndị dị mkpa.
Enwere mmanu ndi nwanyi di ime kwesiri izere. Ndị a gụnyere oregano, thyme, fennel, yana kloove. Anyị ga-enye nkọwa ndị ọzọ gbasara ya ma emechaa, yabụ, na-agụ.
4. Zere iji mmanụ mmanụ n'ime.
N’ime afọ ime, anyị na-adụ ndị mama m ọdụ ume ka ha ghara iji mmanụ mmanụ n’ime, ọkachasị maka oge izizi. Ọzọkwa, ụmụ nwanyị dị ime ekwesịghị ị oilsụ mmanụ dị mkpa n'ime afọ ime ahụ dum. N'ihi na ọ nwere ike imetụta uto nke nwa, ịbụ ihe egwu nwere ike ime ọpụpụ yana ọrụ ime tupu arụ ọrụ. Okwu a, “jiri ya n'ime” mejupụtara mmanụ dị n'ime ihe ọ drinksụ drinksụ, na-etinye ya kapị ọnụ ka ọ bụrụ ihe oriri, ma ọ bụ iji mmanụ esi nri.
Mmanụ ndị dị mkpa maka ịtụrụ ime
Kedu mmanụ dị mkpa dị mma maka ịtụrụ ime? Enweghị nchekasị, anyị emere gị ndepụta ahụ. Agbanyeghị, ọzọ, nyocha ya na onye na-ahụ maka ahụike gị ugboro abụọ tupu ijiri ya n'onwe gị.
N'ebe a, mmanụ 11 dị mkpa dị mkpa nke ụmụ nwanyị dị ime na-anabata maka ike ha dị ịtụnanya nke ime ime:
1. Anụ ọhịa /Oroma
Ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị na-atụ anya ga-agwa gị na ịtụrụ ime fọrọ obere ka ike gwụ ha.
Dị ka 'mmiri ọgwụ mgbochi', mmanụ citrus, a kwenyere na ha na-ewuli elu, na-eme ka ike ya dị elu. Ole na ole ọgwụgwọ anụ ahụ nwere ike iwuli ọnọdụ gị na mmụọ gị ike dị ka mmanụ oroma dị mkpa.
Mmanụ citrus ọzọ ị nwere ike iji mee mgbe ị dị ime bụ neroli, nke a na-enweta site na ifuru oroma dị ilu site na ịmị ọkụ.
Neroli nwere akụkọ ihe mere eme ogologo oge nke iji ọgwụ mgbochi, aphrodisiac, na antiseptik. Ọzọkwa, mmanụ neroli dị oke mma maka ibelata ihe mgbu.
Anyị na-atụ aro itinye ntakịrị mmiri oroma ọ bụla yana neroli na onye na-ahụ maka ịsa mmiri na mbido ọrụ.
Nchoputa egosiputara na mmanu mmanu na igbago mmanu di nkpa nwere ike belata nchekasị na nchekasị na oru Anyị maara na nwanyị ịma ihe mgbu nwere ike ibelata mgbe o zuru ike. Odor na isi ndi ahu nwere ike jikọtara ha na ebe nchekwa. Y’oburu na nwetagoro izu ike site n’enye uvender ma obu itughari azu ndi oma, ihapu ya mgbe obula i nwere ike inyere gi aka icheta udiri ihe ndia.
Dika otu n’ime mmanu di nkpa di nma, enwere ike iji lavender mee ihe maka otutu ihe omimi ime, tinyere iwetulata nkpagbu na nchekasị. Site n'enyemaka a, a na-ejikarị ya arụ ọrụ. Maka ndị ọrịa nwere 'atụmatụ ịmụ nwa,' mmanụ ndị dị mkpa na-abụkarị akụkụ nke ọgwụgwọ ha. Lavender bụ ihe a ma ama maka ịdị jụụ, na-elekwasị anya ma na-emekwa ka ahụ dị jụụ.
Anyị na-adụ ọdụ ịgbakwunye mmiri ole na ole na bọọlụ owu. Nwekwara ike igbanwe ha na mmanụ na - eweta mmanụ maka azụ ma ọ bụ afọ ịhịa aka n'ahụ n'oge ọrụ. Ma ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu ụra nke afọ ime, tụlee iche 10 tụlee nke lavender oil iji nyere gị aka ịrahụ ụra.
Ma mụ onwe m, agwakọta mmanụ lavender na karama n'ime ọkpọ mpekere m ka m jiri ehi ụra. Usoro a nwekwara ike ịba uru maka nne na-amụ nwa.
Nsogbu nri diges na-ata gị ụfụ n'oge ịtụrụ ime? You nwere ike ịnwale ya na mmanụ chamomile, nke a na-eji maka nri diges kemgbe narị afọ gara aga. A na-adabere na mmanu a na-eme ka ihe na-anyụ anyụ pụta maka afọ mgbu, gas, na afọ ọsịsa.
Dị ka lavender, ọ na-enye aka n'oge ọrụ. Ọzọkwa, a chọpụtara na mmanụ chamomile, jikọtara ya na paịlị, ka a chọpụtara na ọ bụ otu n'ime usoro kachasị dị mma iji mee ka ihe mgbu kwụsị.
Ndị mmadụ na-eji mmanụ dị mkpa a siri ike mee ka ọ kwụsịlata ọgbụgbọ, afọ mgbu, na afọ mgbu. Nnyocha na-egosi na ịhịa aka n'ahụ na-enyere nwanyị aka nwere afọ mgbu. N'otu aka ahụ, mmanụ a na-ekpo ọkụ nwere ike iji dị ka mmanụ ịhịa aka n'ahụ (agwakọta ya na mmanụ ụgbọelu mgbe niile) iji belata ihe mgbu.
Dịka ezigbo mmanụ sistemụ na-akpata nchekasị na obi erughị ala, mmanụ a na-atọ ụtọ, nke na-amị mkpụrụ bụ ihe na-ebuli ọnọdụ elu yana onye na-akwụsị nchekasị. Ylang ylang nwekwara ike ịrụ ọrụ dị ka ihe nkwekọ na-edozi ọbara ọbara ma na-eme ka ọrụ gị ka mma.
Gbalịa mee ka ụfọdụ ihe gị na onye na-enye gị mgbasa dị na-akpachapụ anya ka ị gbanwee obi gị.
Ọtụtụ mamas na-enweta imi mkpọchi ma ọ bụ mkpọchi na-adịghị ala ala n'oge afọ ime. Ọ bụ otu n’ime ọtụtụ ihe nrịba ama na mgbaàmà nke mgbanwe hormone na-ebute n’ahụ.
Dika otutu usoro ọgwụgwọ ogbugbu na-apụ apụ mgbe ị dị ime, otu ọgwụgwọ ebumpụta ụwa nke nwere ike inye aka belata sinus na mkpọchi mkpọchi bụ mmanụ dị oke mkpa. N'ịbụ nke dị ọcha site na osisi mgbe ochie, eucalyptus nwere ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ nke ịkwụsị ụkwara na ikpochapụ nje ndị na-efe efe.
Ọtụtụ ụmụ nwanyị dị ime ji mmanụ frankincense mee ha ahụ mgbu.
Ọ na - akwalite izu ike ma na - akwado ahụ ike. Nwere ike iji ha mee butter ara iji belata akara aka.
9. Osisi tii
N'ihi mgbanwe nke homonụ, ọtụtụ mamas na-enwe ihe otutu dị ime afọ na-eyi egwu. Luckily, mmanụ osisi tii nwere ihe mgbochi siri ike, antiviral na antifungal.
Osisi tii nwere ọtụtụ narị afọ eji eme ọgwụ mgbochi ọgwụ maka ọtụtụ ọrịa gụnyere akpịrị, hemorrhoids, na ahụhụ ahụhụ.
Iji gwọọ ọnya, gwakọta mmanụ tii dị mkpa na mmanụ aki oyibo dị ka mmanụ ịhịa aka na ihu. Ete ha na Q-n'ọnụ mgbe ịsachasị yana tupu moisturizing.
Note: Ejila mmanụ osisi tii ma ọ bụrụ na ị nwere pusi. Nwere ike gụọ blog ọzọ-Mmanụ lemongrass adịghị mma maka nwamba?
10. Oroma nkịrịsị
Chọta ọgwụgwọ maka ọrịa ụtụtụ? Enwere ike ịnweta ya na skins lemons, mmanụ dị mkpa lemon iji gwọọ ọrịa ụtụtụ, vomiting, na ọgbụgbọ. Dabere na nyocha ụlọ ọgwụ, ihe karịrị pasent iri ise nke ụmụ nwanyị dị ime nwetara ahụ efe dị ukwuu na mgbaàmà nke ọgbụgbọ ma ọ bụ ọgbụgbọ mgbe mmesoro miri mmanụ dị mkpa.
11. Na ose
Mpekere pepemint nwere ike inyere gị aka ịgwọ ọgbụgbọ na mgbu mgbu. Ọzọkwa, ọgwụ Peppermint inhalation egosila na ọ bara uru maka ụmụ nwanyị na-amụ nwa na-enwe nsogbu n'iwepu eriri afọ ha. Mmanụ Spearmint fọrọ nke nta ka ọ nweta otu uru ahụ dị ka mmanụ peppermint ma rụọ ọrụ n'ụzọ dị ala.
Kedu mmanụ dị mkpa dị mma maka ịtụrụ ime?
Mgbe gị na dọkịta gị kwuchara gbasara ịtụrụ ime gị na mmanụ ndị dị mkpa, ị ga - ebido jiri mmanụ dị mkpa mgbe ị dị ime. Nke a bụ ozi maka otu esi eji mmanụ dị mkpa iji belata ihe mgbaàmà n'oge ime:
Iji belata ọgbụgbọ ma ọ bụ vomiting: Lavender, chamomile, pepepepe, ginger, cardamom. Were ya na karama ahụ, ma ọ bụ were bọọlụ ma ọ bụ anụ ya were otu mmịrị ma ọ bụ abụọ tee ya n’elu ya. Ha na-eme ka iwe dị jụụ ma dịkwa mma mmanụ dị mma maka ọrịa ụtụtụ.
Mmanụ ndị dị mkpa maka mgbu azụ n'oge ime: Lavender, ylang-ylang, ginger, chamomile, frankincense. Tinye ngụkọta nke 12 tụlee nke mmanụ dị mkpa na ngaji 5 nke mmanụ ụgbọelu, dị ka oyibo ma ọ bụ mmanụ almọnd.
Can nwekwara ike iji ha na-agwọ mgbu azụ na-akpata: calkwụsịlata mmanụ dị mkpa na azụ nwere ike ịba uru mgbe ị na-enwe mgbakasị azụ. Mgbe mgbu n’ime ụkwụ ma ọ bụ n’ụkwụ apụta, ịta mmanụ ndị dị mkpa na nsọtụ ala nwere ike inyere mpaghara ndị a aka.
Dị ka ọgwụgwọ hemorrhoids: Osisi ori, osisi anaeho, geranium, lavender. “Ihe ndị a nwere ike ime ka ọzịza ọfụma ma nweekwa ọnya. Gwakọta mmanụ ndị a dị mkpa (maka ngụkọta nke 8 tụlee), wee tinye mix ahụ na ngaji abụọ nke aloe vera gel. Jiri Q-Tip ma ọ bụ bọọlụ bekee tinye ha na mpaghara emetụtara.
Mmanụ ndị dị mkpa maka ụra ka mma n’oge ime
Ezigbo ụra dị ezigbo mkpa mgbe ị dị ime. Mmanụ ndị dị mkpa dị ka Lavender, ylang-ylang, asụsụ Mandarin, frankincense, Clary Sage, Dill yana Sandalwood nwere ihe ndị na-eme ka obi dị jụụ. Can nwere ike iji ha rụọ ọmarịcha ebe obibi maka izu ụka zuru ezu.
Maka ụra dị mma n’oge ịtụrụ ime, nwalee ndụmọdụ ndị a:
Tinye mmanu iri di nkpa nke mmanu di nkpa.
Tinye ngụkọta nke 8 tụlee mmanụ dị mkpa na iko abụọ nke mmiri mmiri nwere ike itinye na karama ịgba, na blanket ma ọ bụ ohiri isi n'abalị.
Mmanụ ndị dị mkpa maka imezi akpụkpọ n'oge afọ ime
Ahụ nwanyị nke na-atụ anya na-agbanwe agbanwe mgbe niile, na-enwe mgbanwe na anụahụ. Ka ahụ na-arụ ọrụ iji hụ na nwa ọhụrụ na-eto eto, akpụkpọ afọ nwere ike ịgbatị agbatị. Okwu ọzọ ọtụtụ mamas na-enweta mgbe ha dị ime bụ anụahụ. N'ụzọ dị mma, ọtụtụ mmanụ dị mkpa nwere ike inye aka belata ihe mgbaàmà nke akpụkpọ mmanu ma mee ka ahụ gị mara mma.
Ebe a bụ mmanụ dị mkpa maka anụrị n'oge afọ ime:
Mmanụ mkpụrụ vaịn.
Mmanụ ndị dị mkpa maka ọrụ na nnyefe:
N'ihi mmanụ dị mkpa na-eweta mmetụta ndị na-ewuli elu na izu ike, ha nwere ike inye aka nke ukwuu n'oge ọrụ na nnyefe mgbe nrụgide na nchekasị na-arụkarị ọrụ. Nchoputa gosiputara na umunwanyi ndi ji mmanu di nkpa n ’oru nile ha na oru ha nwere nzaghachi nke ihe di obere ma nwekwaa obi uto banyere ihe ha mere, mgbe ndi ozo na-ejighi mmanu di mkpa.
Jiri oji pepa na Basil tere mmanu mmanu mmanu di na azu ka i zuo ike mgbe oru.
Mmanụ nke ọhịa oroma na-arụ ọrụ dị mma, ọkachasị mgbe nnyefe mgbe ịkwesịrị idozi obi ya na ịnagide nchegbu.
Mmanụ ndị ọzọ nwere ike inye aka n’oge afọ ime
Can nwere ike ịnwale ụdị mmanụ ndị a ozugbo ị kụrụ akara ọnwa nke abụọ:
Mmanụ na mmanụ dị mkpa iji zere n’oge ime.
Agbanyeghị na itinye mmanụ ụfọdụ dị mkpa na mbụ, ị ka ga - eme nke ọma ma ọ bụrụ na ị na - eji ha n'oge ime. Ọzọkwa, Ọ bụrụ na i nweela nfụkasị nri ụfọdụ, ịgaghị eji ya na aromatherapy.
N'elu nke a, ọtụtụ mmanụ dị mkpa dị oke egwu n'oge afọ ime, ma ọ bụ n'ihi na ha nwere ike ibute nsogbu (dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike ịkwalite uterine contractions) ma ọ bụ ndị dọkịta edoghị anya etu ha ga-esi emetụta ụmụ nwanyị na-atụ anya ma ọ bụ nwa ebu n’afọ.
N'ebe a bụ mmanụ dị mkpa ị ga-ezere mgbe ị dị ime:
Arnica Basil Birch (ụtọ) Ilu almọnd
Akwukwo Boldo Aziza sage Clary maara ihe
Kloovu (nwa osisi, akwukwo ma obu azuokokoosisi) Coriander Costus Onyekachi
Elecampane Fennel Buchu Calamus
Kamfo Cassia Cedarwood / thuja Cherịl
Osisi juniper n'okporo ámá Sassafras Savin
Rosemary Melilotus Akwukwo Jaborandi Osisi (dwarf)
Wormwood pennyroyal Pasili (mkpụrụ ma ọ bụ akwukwo) Origanum
Oge oyi marjoram tarragon caraway
Tansy Ogbogu Okonji Thyme uhie (nnukwu doses) Anisela
Tonka Mọstad Nutmeg Nchekwa
pawuda Horseradish Hisop
Usoro nchekwa ndi ozo maka iji mmanu di nkpa n’oge ime.
Aromatherapy na iji mmanụ dị mkpa nwere ike ịba uru n'oge afọ ime. Agbanyeghị, ọ dị mkpa na ị na-eji ha nke ọma iji belata ihe ndị ọ bụla na-akpata ọ bụla. Icrapagidesiri ike na ntuziaka nchekwa ndị a ga-enyere gị aka.
Dika otutu ihe, otutu ihe adighi adi nma mgbe niile. Ikwesiri ịmalite nwayọ. AromaEasy na-atụ aro ka ndị ime ime were otu mmanụ dị ezigbo mkpa were were rịa elu ruru ise. N'ihi mgbanwe nke homonụ, ịtụrụ ime nwere ike ime ka mmadụ mata ịdị na-esi isi, na -eme ka ụfọdụ ndị na-ahụ maka mamịrị na-eme ihe na-emetụta oke. Na ọnụọgụ na-ekwesịghị ekwesị, Ọ nwekwara ike ibute ọrịa, dị ka ọgbụgbọ. Gbalịa itinye mmanụ ahụ na Q-Tip ma ọ bụ bọọlụ owu iji belata. Mgbe ahụ ị nwere ike iwepu ha ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ahụghị gị mma.
Zere itinye ya na akpụkpọ gị. Mmanụ ndị dị mkpa na-achọ mmanụ ndị na-eweta ọrụ mgbe niile, dị ka aki oyibo ma ọ bụ mmanụ almọnd, iji tee mmanụ ahụ ma gbochie iwe anụ ahụ. Onye na - ahụ maka ọgwụ na - enye mmadụ ọgwụ pụrụ inye gị nkọwa ndị ọzọ gbasara ọrụ nkwadebe nke mmanụ dị mkpa.
Etinyela mmanụ dị mkpa mgbe ị dị ime.
Ruo ugbu a, enwebeghị nnyocha na ihe akaebe zuru ezu iji hụ na ime nke a bụ ihe dị mma maka gị na nwa ebu n’afọ. Ọ bụ ezie na mmanụ ndị dị mkpa na-ewu ewu, nyocha banyere ha n'oge afọ ime ka nwere oke. Ọ kachasị mma ka gị na dọkịta gị nwee ike ibu ụzọ kwuo okwu.
Dịka e kwuru na mbụ, ọ bụ ihe ụmụ nwanyị dị ime na-enwe mmetụta uche dị ukwuu maka mmanụ ndị dị mkpa. N’ime afọ ime, ịnwere ike iche maka ịgbanwe mmanụ ole ma ọ bụ ụzọ itinye ihe mgbe ị na-eji mmanụ dị mkpa iji nye aka na uche ọ bụla nwere ike ibilite.
Ejila otu mmanu ogologo oge, di ka ubochi obula.
Nwere ike ịgbakwunye ntụpọ mmanụ ahụ na onye na-ahụ maka ịsafefe, agbanyeghị, ahapụkwala ya ihe karịrị nkeji iri na ise kwa elekere.
Okwesiri iburu n’uche na obughi mmanu mmanu di nkpa ka eji me ya. Ọ dị mkpa na iji mmanụ dị ọcha dị mkpa n'oge ị dị ime - o doro anya na anyị chọrọ mmanụ nke enweghị ihe na-egbu egbu yana ogige ndị na-egbu egbu. A na-anwale mmanụ niile dị mkpa AromaEasy iji mee ka ịdị ọcha na nchekwa ha dị ọcha. Mgbe ị na-eji ha nke ọma, ị ga-achọpụta uru ha bara mgbe ha dị ime.
Na-agwa onye na-ahụ maka ahụike gị mgbe niile tupu ịmalite usoro ọgwụgwọ ọrịa homeopathic ọ bụla.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ kacha mma ịghara iji mmanụ dị mkpa. Zere mmanụ ọ bụla ma ọ bụrụ na:
History nwere akụkọ ime ọpụpụ.
Nwee ụdị ọbara ọgbụgba ọ bụla mgbe ị dị ime.
Nwee akuko gbasara okwu gbasara obi.
Nwere nsogbu gbasara ọrịa mamịrị, nsogbu ọbara, ma ọ bụ nke nwere ọrịa thyroid, imeju ma ọ bụ akụrụ.
Na-a antibioticsụ ọgwụ nje ma ọ bụ antihistamines, ebe mmanụ nwere ike imebi ụzọ ọgwụ niile si arụ ọrụ.
Dị ka oge niile, lezie anya ma ọ bụrụ na ị nwere nfụkasị ma ọ bụ akụkọ banyere ezinụlọ nke allergies. Ọ bụrụ n ’ị chere na ị ga-enwe ike nfụkasị mmanụ ụfọdụ, mee nyocha patị tupu iji ya.
AromaEasy ewepụtala ozi banyere mmanụ dị oke mkpa n’oge ime dị ebumnuche kacha mma ma ọ bụrụ kwe omume. Na mmanụ dị oke mma dị mkpa na kwa ọkachamara ndụmọdụ, ị nwere ike ịchọpụta na ịmịcha mmiri ọgwụ nwere ike ime ka ahụ dị gị mma n'oge afọ ime.
Agbanyeghị, ọ bụ ọrụ dịịrị ndị ọrụ mmanụ ahụ ịchọ ndụmọdụ ọkachamara site n’aka dọkịta ma ọ bụ onye na-ahụ maka ahụike mgbe ị na-ewere mmanụ ndị kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ ha kpọmkwem.
Mkpa Mkpa Mkpa Mpempe mmanụ